Heshiis cusub oo ay si wada jir ah u ansixiyeen shaqaalaha huteelka Pan Pacific Toronto
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Heshiis cusub oo ay si wada jir ah u ansixiyeen shaqaalaha huteelka Pan Pacific Toronto
Unifor Local 112 xubnood oo ka tirsan hoteelka Pan Pacific Toronto ayaa ansixiyay heshiis cusub oo loo shaqeeyuhu boqolkiiba 100.
“Unifor waa midowga Canada ee shaqaalaha martigelinta,” ayuu yiri Jerry Dias, Madaxweynaha Qaranka ee Unifor. "Aad ayaan ugu faraxsanahay shaqada guddigayga gorgortanka maxalliga ah ee 112 ay u qabteen sugidda heshiis xoog leh waqtiyadan adag."
Wada -xaajoodka maamulka huteelka waxaa cidhiidhyay bilooyin lacago qalad ah oo la siinayay sanduuqa caafimaadka iyo daryeelka shaqaalaha hoteelka iyo qorshaha hawlgabka. Unifor Local 112 ayaa hore ugu guulaystay dacwado sharci ah oo ku amraya hudheelka inuu bixiyo $ 200,000 oo ah lacag -bixin dambe iyo dulsaar.
John Turner, Madaxweynaha 19 ee maxalliga ah ayaa yidhi: "In la yidhaahdo masiibada COVID-112 waxay aad ugu xumayd shaqaalaha martigelinta waa wax laga xumaado." "Faafida ayaa si cad u muujisay muhiimada shaqaalaha hoteelka ay leeyihiin ilaalinta midowga la xisaabtamaya loo -shaqeeyayaasha."
Heshiisku wuxuu kordhiyay xuquuqda soo-celinta xubnaha shaqaalaha, oo ay ku jiraan xuquuqda soo-celinta masiibada illaa Maarso 2023, xuquuqda dib-u-yeeridda dib-u-habeyn kasta oo la xiriirta dib-u-habeyn, iyo 78 toddobaad oo ah xuquuqda dib-u-yeeridda wixii shaqo-joojin kale ah. Sidoo kale, luqadda sugidda shaqada ee xubnaha ayaa la xoojiyay iyada oo ay ka go'an tahay in aan loo beddelin dhismaha hoteelka guryo is -kaashatada ah. Heshiiska ayaa sidoo kale soo bandhigaya meel u -doodaha Caddaaladda Jinsiyadda si loo taageero shaqaalaha Madow, Asaliga ah iyo midab -kala -sooca.
Horumarka dhaqaale ee dhammaystiran ee heshiiska waxaa ka mid ah korodhka mushaharka, tabarucayaasha sare ee faa'iidooyinka caafimaadka iyo hawlgabka labadaba, sagaal bilood oo caymiska daawada qoyska ee shaqaalaha waqtiga buuxa la cayriyey, $ 5 kaabis cunto maalintii, iyo gunnada hawlgabka oo la xoojiyay, ugu sarraysa qaybta hoteelka Toronto, waa la dayactiray. Shaqo -bixiyuhu wuxuu kaloo oggolaaday jadwalka dib -u -bixinta inta ka hadhay lacag -bixinta xad -dhaafka ah ee loo -shaqeeyaha ee sanduuqa caafimaadka iyo daryeelka shaqaalaha iyo qorshaha hawl -gabka.
Culeyska shaqada guriga ayaa sidoo kale la hagaajiyay, oo aysan ku jirin wax saacado ah oo ka lumay adeegayaasha qolka hoteelka haddii huteelku doorto barnaamij 'doorasho cagaaran' oo aan caddaalad ahayn oo shaki leh. Ka -qaybgalayaasha Qolka Baasifigga waxay nadiifiyaan wax aan ka badnayn 14 qol maalintii.
“Waxaan u mahadcelinayaa midnimada kooxdayada gorgortanka iyo wadajirka xubinimadeena waxaan xaqiijinnay heshiis ka dhaadhicinaya mudnaanta muhiimka ah ee xubnaha,” ayay tiri Andrea Henry, Guddoomiyaha Unugga 112 ee Hoteelka Pan Pacific. "Shaqaalaha hudheelka ayaa si xun ugu dhibtooday masiibadan, waxaanan ku faanayaa inaan isbeddel weyn u samaynay xubnaha."
Unifor waa ururka ugu weyn Kanada ee ku jira qaybaha gaarka loo leeyahay, oo matalaya 315,000 oo shaqaale ah meel kasta oo ka mid ah dhaqaalaha. Ururku wuxuu u doodaa dhammaan dadka shaqeeya iyo xuquuqdooda, wuxuu u halgamayaa sinnaanta iyo caddaaladda bulshada Kanada iyo dibaddaba, wuxuuna ku dadaalaa inuu abuuro isbeddel horumar leh si loo helo mustaqbal wanaagsan.